नेपाल मेडिकल कलेजका डाक्टरले शिशु तान्दा पाठेघर नै बाहिर आएपछि आमाको मृ’त्यु ! -
नेपाल मेडिकल कलेजका डाक्टरले शिशु तान्दा पाठेघर नै बाहिर आएपछि आमाको मृ’त्यु !
काठमाडौं। जोरपाटी अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएपछि लापरबाही गरेको भन्दै आफन्तले तो’डफो’ड गरेका छन्। भोजपुर षडानन्द नगरपालिका-८ की सुनिता राईले २४ गते राती ११ बजे बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्।
नवजात शिशु स्वस्थ रहे पनि सुत्केरीका क्रममा सुनिताको मृ’त्यु भएपछि आफन्तले लापरबाहीको आ’रोप लगाएका छन्। मृ’तककी आफन्त कला राईका अनुसार सुत्केरी गराउने क्रममा भ्याकुमले बच्चा तान्दा लापरबाही भएको हो। भ्याकुमले सुत्केरीको पाठेघरसमेत तानेर चुँडाइ दिएको उनले आ’रोप लगाएकी छिन्।
आफन्तले घ’टनाको छानबिन गरी दो’षीलाई का’रबाहीको माग समेत गरेका छन्। सो क्रममा आ’क्रोशित आफन्तले अस्पताल परिसरमा तो’डफो’ड गरेका छन्। आफन्तले अस्पताल प्रशासनलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भन्दै ना’राबा’जी समेत गरेका छन्। तर प्रशासनका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। अस्पतालमा तो’डफो’ड भएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ।
प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो गोंगबु ह’त्याका मुख्य
नेकपाका तीन दर्जन कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश,
कुखुराको मासु खानुहुन्छ होसियार ! भित्रिए